2 Korinte 7 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
7 Ngoko ke, ekubeni sinazo ezi zithembiso,+ zintanda, masizihlambulule+ kuko konke ukudyobheka kwenyama nokomoya,+ sigqibelelisa ubungcwele sisoyika uThixo.+ 2 Sivuleleni igumbi.+ Akukho bani simenze bubi, akukho bani simonakalisileyo, akukho bani simxhaphazileyo.+ 3 Andikutsho oku ukuze ndinigwebele isohlwayo. Kuba ngaphambili ndithe nisezintliziyweni zethu ukuze nife, niphile kunye nathi.+ 4 Ndinenkululeko enkulu yokuthetha kuni. Ndiqhayisa kakhulu ngani.+ Ndizaliswe yintuthuzelo,+ ndiyaphuphuma luvuyo kuyo yonke inkxwaleko yethu.+ 5 Enyanisweni, ekufikeni kwethu eMakedoni,+ inyama yethu ayizange ifumane kukhululeka,+ kodwa saqhubeka sixhwaleka+ ngandlela zonke—kwakukho imilo ngaphandle, iluloyiko ngaphakathi. 6 Noko ke uThixo, obathuthuzelayo+ abo badakumbileyo, wasithuthuzela ngobukho bukaTito; 7 kanti kungengabukho bakhe bodwa, kodwa nangokuthuthuzeleka kwakhe kuni, njengoko wasiphathela kwakhona ingxelo+ engokundilangazelela kwenu, nokundizilela kwenu, nenzondelelo yenu ngam; kangangokuba ndaba nemihlali nangakumbi. 8 Ngoko ke kwanokuba ndanenza buhlungu ngencwadi yam,+ andizisoli. Kwanokuba ekuqaleni ndazisola, (ndiyabona ukuba laa ncwadi yanenza buhlungu, nakuba kodwa kwakukokwethutyana,) 9 ngoku ndinemihlali, kungekhona ngenxa nje yokuba naba buhlungu, kodwa ngenxa yokuba naba buhlungu ukusa ekuguqukeni;+ kuba naba buhlungu ngendlela yobuthixo,+ ukuze ningonakalelwa kuyo nantoni na ngenxa yethu. 10 Kuba ukuba buhlungu ngendlela yobuthixo kusingisa enguqukweni esa elusindisweni ekungekho kuzisola ngayo;+ kodwa ukuba buhlungu kwehlabathi kuvelisa ukufa.+ 11 Khangelani! indlela enkulu ngayo inyameko okuyivelisileyo ukuba buhlungu kwenu ngendlela yobuthixo,+ kuba nitsho nazihlambulula, nacaphuka, nanoloyiko, nanolangazelelo, nanenzondelelo, nabulungisa ububi!+ Kuzo zonke iinkalo nizibonakalise ninyulu kulo mbandela. 12 Ngokuqinisekileyo, nangona ndanibhalelayo, ndakwenza oko, kungekhona ngenxa yalowo wenza ububi,+ kungekhona nangenxa yalowo wenziwa ububi, kodwa ukuze inyameko yenu ngathi ibonakaliswe phakathi kwenu emehlweni kaThixo. 13 Kungenxa yoko le nto siye sathuthuzeleka. Noko ke, ukongezelela kwintuthuzelo yethu saba nemihlali kakhulu ngenxa yovuyo lukaTito, ngenxa yokuba nonke niye nawuhlaziya umoya wakhe.+ 14 Kuba ukuba bendiqhayise ngani kuye, andibanga nazintloni; kodwa njengoko sizithethe ngenyaniso zonke izinto kuni, ngokunjalo nokuqhayisa+ kwethu phambi koTito kuye kwangqineka kuyinyaniso. 15 Kanjalo, umsa wakhe mkhulu ngakumbi ngakuni, ngoxa ekhumbula intobelo+ yenu nonke, indlela enamamkela ngayo ngoloyiko nokungcangcazela. 16 Ndinemihlali kuba ngandlela zonke ndisenokomelela kakhulu ngenxa yenu.+